च्याटमा भेटिएका युवती सेक्सका लागि चाँडै तयार ! - Gokarna News from Nepal
च्याटमा भेटिएका युवती सेक्सका लागि चाँडै तयार !
सोमबार, माघ २१, २०७५ by Gokarna News
एजेन्सी– युवतीहरुमा यौन चाहना भएपनि पुरुषहरु जसरी उनीहरु यौनसम्पर्कका लागि चाडै तयार हुदैनन् ।
तर ‘नेट च्याटिङ’ पछि भेट्नेहरु भरसक त्यसै दिनमा सेक्स गर्छन । यो अनुपात दैनिक भेट्नेहरुमा धेरै समय लाग्ने गर्छ र सेक्सको लागि त बर्षौ कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
हालै एउटा फिटनेस पत्रिकाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणमा विभिन्न सोशल नेटवर्किङ साइट्सबाट चिनजान हुने पाँच महिलाहरुमा चार महिलाहरुले र पाँच पुरुषहरुमा तीन जनाले अनलाइन पार्टनरहरुसंग निकै थोरै समयमा सेक्स भएको रिपोर्ट निकालेको थियो ।
बिज्ञहरुका अनुसार यो सर्वेले यी बिज्ञहरुलाई हैरानीको सट्टा उनीहरुको अनुमानलाई सहि बनाएको छ । बिज्ञ भन्छन, ‘मानिसहरु जब भर्चुअल रिलेशनशिपमा हुन्छन उनीहरुको बीचको दुरी असध्य कम हुने गरेको छ र यो दुरी कम हुन अति नै छोटो समय लाग्ने गर्छ ।
खासगरी दैनिक भेटघाट हुने जोडीमा कतै न कतै अलि लाज रहेकोले सेक्सको बारेमा बात मर्न निकै समय लाग्ने गर्छ ।
यद्यपी, यो समस्या अनलाइन जोडीमा हुँदैन र निर्धक्कसंग सेक्सको बारेमा दिल खोलेर कुरा गर्छन र आफ्नो छेउ छाउमा पनि कोहि अरु नरेहेको अवस्था हुन्छ र आफु सुरक्षित महसुस गर्छन र धेरै छोटो समयमा नै यी भर्चुअल जोडीमा सेक्सको संबाद ढुक्कसंग हुने गरेको छ र दुवैले लागेको यौन जिज्ञासा मेटाउने गरेका छन् ।
विभिन्न सामाजिक संजालका वेबसाइटहरुले नै सबैलाई नजिक लिएर आउन जति सजिलो बनाएको छ त्यतिनै यसबाट यौन अपराधका घटनाहरु पनि अगाडी आइरहेको छन् ।
यसर्थ सबै भर्चुअल जोडीहरुलाई सावधानीपुर्वक नजिक हुन आवश्यक छ अन्यथा आफु नै यौन पिडित हुन सकिने सम्भावना रहन्छ ।